GNU / Linux မှစွမ်းအားကြီးသော Hadron Collider Linux မှ
GNU / Linux မှစွမ်းအားကြီးသော Hadron Collider
မနေ့ကဥရောပနျူကလီးယားရူပဗေဒအဖွဲ့မှသိပ္ပံပညာရှင်များ (CERN၊ အင်္ဂလိပ်လိုအတိုကောက်) ဂျီနီဗာတွင်တပ်ဆင်ထားသောအမှုန်အရှိန်မြှင့်တွင်ပရိုတွန် ၂ ထုပ်ကိုတိုက်မိသည်စကြာ ၀ inာအတွင်းရှိမသိသောများစွာသောအဖြေရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤသည်မကြာသေးမီအချိန်ကအရေးအကြီးဆုံးရူပဗေဒပရောဂျက်ဖြစ်သောအကြီးစား Hadron Collider (LHC, အကြီးစား Hadron Collider) သည်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံကုန်ကျခဲ့ပြီး၎င်းကိုတည်ဆောက်ရန်နှစ် ၂၀ အတွင်းနှင့်ကမ္ဘာ၏ Astrophysicists ၏ထက်ဝက်နီးပါး၏အလှူငွေသည် အဲဒါကိုအလုပ်လုပ်စေရန်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုအပ်သည် - GNU / Linux များ.
LHC စီမံကိန်းတာ ၀ န်ယူသည့် CERN သည်လူသိများသောအရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုနေသည် သိပ္ပံနည်းကျဘယ်ဟာက၎င်းသည် CPUs ၁၀၀၀၀၀ ခန့်နှင့်တစ်နှစ်လျှင်အချက်အလက် ၁၅ ပေခန့်ရှိသောကွန်ယက်တစ်ခုလုံးရှိကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
CERN ကိုယ်တိုင် GNU / Linux တွင်အတွေ့အကြုံအတော်အတန်ရှိပြီး၊ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းထားသောမူကွဲဖြစ်သော Scientific Linux ဖြန့်ဖြူးမှုကိုခိုင်မာသည့်အထောက်အပံ့ပေးသည်။ Red Hat လုပ်ငန်း Linuxဆင်တူ CentOS.
ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုဖျက်ဆီးရန်အာကာသအတွင်းတွင်းနက်တစ်ခုဖန်တီးရန် LHC ၏စွမ်းအားသည်လုံလောက်သောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကအပိုင်းအစအချို့သည်အပြာရောင်သေခြင်း၏မြင်ကွင်းနှင့်မဝေးနိုင်ကြောင်းသိရခြင်းကအလွန်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » GNU / Linux မှစွမ်းအားကြီးသော Hadron Collider
ဆရာ၊ ဆရာမတွေရှိတယ်။ အကယ်၍ အနက်ရောင်အပေါက်တစ်ခု (နေရာမရှိ၊ အမြဲတမ်းတည်ရှိနေသောနေရာ) တွင်နေရာတစ်ခုတွင်ဒြပ်ထုများစုစည်းထားလျှင် HADRONES collider ၏အကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်အားအနည်းငယ်နားလည်စေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများမှာ -
၅: _ အဏုမြူစွမ်းအင်အက်တေးရှင်းကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ ပြောနေတာလား။ သူတို့သက်ဆိုင်ရာအမြန်နှုန်းကိုရောက်သောအခါသူတို့သည်ရာသီဥတုအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေမည့် subatomic ဘေးအန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Joel Alanis အားပြန်ကြားပါ
ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုဖျက်ဆီးရန် LHC ၏“ စွမ်းအား” သည်အဘယ်နေရာတွင်ရှိသနည်း။
ဝိုး! စိတ်ကူးမရှိပါ။ ကောင်းသောမေးခွန်းများ။ ဝီကီပီးဒီးယားမှာအကူအညီရှိလား။
အက်ဝါဒို Lev ဟုသူကပြောသည်
ဖန်တီးမည့်တွင်းနက်သည်၎င်းကိုပြုလုပ်သောအမှုန်များ၏တူညီသောဒြပ်ထု (နှင့်ထို့ကြောင့်တူညီသောမြေထုဆွဲအားဆွဲဆောင်မှု) ရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်သေးငယ်သည်။ Hadron collider သည်နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုတွင်နျူထရွန်တိုက်မှုများထက်စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားစွာအလုပ်လုပ်သည်။ fissile element များကိုမသုံးပါ၊ ထို့ကြောင့်ဗုံးပုံစံနျူကလီးယားကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ LHC ၏အယူအဆမှာစွမ်းအင်ရရှိရန်မဟုတ်ပါ၊ Big Bang နှင့်ဆင်တူသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုတွင် subatomic အမှုန်များကိုမည်သို့ခွဲဝေသည်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့်လေ့လာရန်ဖြစ်သည်။
Eduardo Lev သို့ပြန်ပြောပါ
ဒီသတင်းဟာအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပေမယ့်ကျွန်တော်မသိတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ဟက္ကာတစ်ယောက်ဟာစက်ထဲကို ၀ င်လာပြီးနီးပါးစက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ထိုနေရာမှဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲလှိုင်းထက်သာသည်ကိုငါပြောမည်။ ပြီးတော့အဲ့ဒီပရောဂျက်မှာသူတို့ Linux သုံးတာကိုသတိထားမိတယ်။ ဟေး ... ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်အောင် Linux ကအရမ်းလုံခြုံတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဆော့ဖ်ဝဲအများစုသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုဆော့၏“ စံနမူနာပြနိုင်သည့်ယဉ်ကျေးမှု” (မဆုတ်မနစ်ရှာဖွေခြင်း) ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အားဖျားနာခြင်းထက်ပိုပြီးငါ Linux သို့ပြောင်းရွှေ့နေခြင်းဖြစ်သည်။
Sweet Home 3D ဖြင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း